१२ वर्षकै उमेरमा यस्तो भोग्नुपर्यो! घर नहुँदा रितु बोहोरा मन्दिरमै बसिन् कि’रिया (सहयोग स्वरुप सेयर गराै) – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Video/१२ वर्षकै उमेरमा यस्तो भोग्नुपर्यो! घर नहुँदा रितु बोहोरा मन्दिरमै बसिन् कि’रिया (सहयोग स्वरुप सेयर गराै)
एजेन्सी । सल्यान सिद्दकुमाख गाउँपालिका ३ कल्याचाैरका भाेलाराम बाेहरा एउटा सुन्दर भविष्यका लागि १४ वर्ष अघि श्रीमती सँगै दाङ तुलसीपुर झरे । उनले मजदुरी गर्दै श्रीमती र सन्तानकाे रुपमा रहेकी एउटी छाेरीलाइ पालनपाेषण गर्दै आएका थिए । भाेलारामले टिप्पर चलाउँथे । श्रीमती र छाेरीलाइ तुलसीपुरकाे बेलुवामा काेठा भाडामा लिएर राखेका थिए ।
तर यहि बैशाख ७ गते चैते दशैंकाे दिन याे परिवारमा एउटा ठुलाे ब्रजापात भयाे । पाल्पाकाे माथागढी गाउँपालिका ५ स्थित चुनढुङ्गा खानीकाे लागि उनले टि’प्पर चलाउथे । चैते दशैकाे दिन आफैले चलाएकाे टिप्पर दु’र्घटनामा परेर उनकाे मृ’त्यु भयाे । उनकाे मृ’त्युपछि अहिले श्रीमती र छाेरीकाे दाङमा बि’चल्ली भएकाे छ ।
परिवार चलाउने अगाडीकाे मान्छेकाे नि’धन भैसकेपछि घर नभएकाे अवस्थामा अब याे परिवारमा ठुलाे समस्या परेकाे छिमेकी सुवर्ण याेगीले बताए । उनलाइ सहयाेग गर्न चाहानेले श्रीमती साेभा बाेहराकाे एभरेष्ट बैंक लिमिटेडमा रहेकाे खाता नम्बर ०३३००५०१२१०३४१ मा सहयाेग गर्न सक्ने र ९८१०९५१५७८ र ९७४२२३०२२६ मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
विवाह गरेको दुई महिनामै १६ वर्षीया निमाको ‘रहस्यमय’ मृत्यु (भिडियो)